DHAGEYSO: Dowladda oo ka hadashay Amarkii Al-Shabaab ay kusoo rogeen Muqdisho – Marqaanmedia24.com
March 12, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 3
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Cabdicasiis Xildhibaan oo la hadlay Warbaahinta ayaa waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay gacanta ku heyso Magaalada Muqdisho, islamarkaana Amarka Al-Shabaab uusan ka dhaqan gelikarin.
Muqdisho waxa weli ka taliya Alshabaan. Ha’is dhaq dhaqaajin ayay weli ku hayaan. Ganacsatada weli cashuur ayay ka qaadaan. Weriyayaasha khasab ayay kaga dhigaan inay wareysiyo ka qaadaan. Kuwii kasoo horjeestana wey laayaan. Dadka caadiga ahi iyaga ayay ka foojigan yihiin.
Dawlada taagta dran ee Armaajo kabaryeeriga ka yahay ilaa iyo inta ay Amisom iska eryayaan waxba ma qabsan kari doonaan. Xaarla ayuunbaa ka di’i doona.
Waa saas oo wali waxaa xamar ku awood roon AL-Shabaab?Horta Shabaab yaa waaye?
War shabaab waa dad ka mida beesha Hawiye oo cidkale ma aha.Shabaabka dadka dilaa waa dad xamar wax ka dagan oo gurayhooda si caadi ah u jooga oo an cidna ka baqayn.Shabaab waxuu ka mid yahay madaxda dawlada,Ciidamada,ganacsatad,Odayaasha iyo shaqaalaha dawlad itaalka yar.Adduunka ilaahay xamar ka hor laguma arag dawlad iyo jabhaddii la diriraysey oo isku magaalo dagan oo habeenkiina kala shaqaysta maalintiina wada shaqeeya oo haddana is wada yaqaan.
Taasna waxaa keenay ficilkii xumaa ee ay wax garadka hawiye raali ka wada ahaayeen ee ahaa XASUUQA SOOMAALIDA KALE.xASUUQIINA MAANTA WAXUU KU SOO JEESTAY BEESHA HAWIYE.Markaasuu ku dhacaa shacab masaakiin ah oo an cidna wax u dhimin.
Waa sheeko dheer.
Kkkkkk ATARIISHO,,,,, HAWIYE SHABAAB HA AHAADO AMA DOWLADA HA KA MID AHDEE ANSHAX XUMADA DHULKAAGA TAAL MA TAALO TAALO DHULKA HAWIYE,KKKKKK KKKKKK ha sii qod qodin xaalada meesha noogu jooji OK